Madaxwaynayaasha Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka oo kulan labaad yeelanaya – Radio Daljir
Janaayo 19, 2019 6:41 b 0
Madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shir madaxeedkii labaad la yeelanaya dhammaadka bisha February madaxwaynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, kaasi oo daba socda kulankii horay ay labada madaxwayne ugu yeesheen Kuuriyada Koonfureed.
Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa sheegaya Donald Trump inuu la kulmay sarkaalka ugu sareeya wada xaajoodka Kuuriyada Waqooyi ee dhanka Nuclearka Kim Yong Chol.
“Madaxwayne Trump waxaa uu la kulmay Kim Yong Chol , kaasi oo socdayb hal saac, waxaana laga wada hadalay in la joojiyo sii fidista nuclearka , in la qabto shir madaxeedkii labaad” ayay tiri Sarah Sanders oo warsaxaafadeed qoraal soo saartay.
Madaxwaynaha Mareykanka Trump ayaa ka sheegay shir madaxeedkii June in khatarta Nuclearka ay haysatay Kuuriyada Waqooyi uu dhamaaday.
Sanders ayaa sheegtay in ay sii wadayaan hormarka laga gaaray in Nuclearka laga caaganooda, wada hadalada ay kula jiraan xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ay sii wadayaan, iyadoo cunaqabataynta ay jirto wali.
Kulanka Trump iyo ergayga Kuuriyada Waqooyi ayaa qayb ka ah wada xaajood ay yeesheen xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyo wakiilka gaarka ah ee Mareykanka ee Kuuriyda Waqooyi Stephen Biegun, kaasi oo wadada loogu gogol xaarayay kulanka labada hogaamiye.